Hery mifono misitery
"Ny taranany ho fantatra any amin’ ny jentilisa ary ny terany any amin’ ny firenena; Izay rehetra mahita azy dia hahafantatra azy ho taranaka notahin’ i Jehovah". - Isa. 61:9.
Ao amin'ny planin'ny famonjena dia misy misitery izay tsy takatry ny sain'olombelona, ary zavatra tsy hain'ny fahendren'olombelona hazavaina; kanefa ny zavaboary dia afaka mampianatra antsika zavatra betsaka mahakasika ny zava-miafin'ny toepanahy araka an'Andriamanitra. Ny zava-maniry rehetra sy ny hazo fihinam-boa rehetra dia manambara lesona natao hianarantsika. Natao hovakintsika ao amin'ny fitomboan'ny voa ny zava-miafin'ny fanjakan’Andriamanitra. Ho an'ny fo nalefahin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia manambara tenim-pahendrena ny masoandro, ny volana, ny kintana, ny hazo sy ny voninkazo eny antsaha (...)
Mankato ny lalàna nataon’Andriamanitra ho azy ny zavaboary. Ny rahona sy ny tselatra, ny tara-masoandro sy ny ranon'ando mbamin'ny orana, dia samy eo ambanin'ny fifehezanAndriamanitra ary mankato ny didiny. Ny fankatoavany ny lalàn'Andriamanitra no mampitsimoka ny voa avy ao anatin'ny tany, "voalohany misy tahony, dia teraka, ary rehefa izany, dia feno voa" -Mar. 4:28. Ao amin'ny felany no ipoiran'ny voa, ary amin'ny fotoany no amoahan'Andriamanitra izany satria tsy manohitra ny asany ilay zava-maniry ( ... )
Moa ve ny olombelona, izay natao tahaka ny endrik'Andriamanitra, nomena fahafaha-mandanjalanja sy miteny, no ho hany tsy mankasitraka ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ka tsy hankato ny lalàn' Andriamanitra? (...)
Fanirian'Andriamanitra ny hianarantsika lesona momba ny fankatoavana avy amin' ny zavaboary (...) Mifampiparasaka hazavana ny bokin'ny natiora sy ny Teny voasoratra. Izy ireo dia samy mitarika antsika hifankahalala misimisy kokoa amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarany antsika ny momba ny toetrany sy ny lalàna izay arahiny rehefa miasa Izy.
Lazao amin'ny zanakao ny amin' ny herin'Andriamanitra manao fahagagana. Rehefa mianatra ny lesona avy amin'ny zavaboary, ilay boky lehibe, izy ireo, dia hokasihin' Andriamanitra ny sainy. Miasa tany sy mamafy ny mpamboly, fa tsy afaka mampitsimoka ny voa. Tsy maintsy miantehitra amin'Andriamanitra izy ny amin'izay zavatra tsy hain'ny herin'olombelona atao. Ataon'Andriamanitra ao amin'ny voa ny heriny mitondra aina, ka mampitsimoka azy mba ho velona. Eo ambanin'ny fiahian' Andriamanitra no hamakian'ny voa ny fonony mafy manodidina azy, ka hitomboany sy hamoazany (...) Rehefa ambara amin'ny ankizy ny asa ataon'Andriamanitra amin'ny voan-java-maniry dia ianaran'izy ireo ny tsiambaratelon'ny fitomboana amin'ny fahasoavana.